Rune Fehu: Inani incazelo kuhlangene, izithombe
Kusukela ezikhathini zasendulo, sezwa Runes - amatshwayo ukuthi izizwe eYurophu namuhla lalisetshenziswa njengesibhedlela zolimi olubhalwayo. Basuke benawo incazelo umlingo ayehloselwe usungule uxhumano imvelo. Kuze kube manje, kodwa kukholakala ukuthi Runes baphathe amandla ezithile ezingasisiza umuntu ukuba babhekane nezinkinga zokuphila, ukuheha umcebo nothando.
Omunye lezi zinhlamvu kuyinto imilingo Rune Fehu. Value, incazelo kanye nencazelo izimpande zabo endulo futhi ancike ezicini eziningi, okuyinto sizama ukuqonda.
Igama elithi "Rune" kuhlehlela emuva sarth kumar and Gothic kusho imfihlo, ngekuhleba engaqondakali. Leli gama, ngokososayensi, kungenziwa ezihlobene amalungelo athile Runes yi izakhiwo ezingaqondakali zamaJalimane lasendulo.
Isici esiyinhloko zamagama Runic kuyinto oda yakhe ekhethekile. Wayelethwa okuthiwa "Futhark" ngoba izinhlamvu zokuqala eziyisithupha kulo. Ngaphezu kwalokho, wonke Runes zihlukaniswe izinhlobo ezintathu, noma ettiry. uphawu ngalinye linama 8. Rune ngasinye unegama. Nokho, ubuqiniso abazi behlele kithi kusukela ezikhathini zasendulo. umsebenzi wokwakha kabusha zabo zisetshenziswa namuhla.
Fehu (noma eminye imithombo Fe, Feu, Feoh) ungowokuqala uhlamvu Futhark, owokuqala (endala) ettira. Enguqulweni kuzwakala "izilwane" noma "isakhiwo". AmaJalimane lasendulo ezibaziweyo Runes esihlahleni noma kuqoshwe kuyo amatshe. Ngenxa nobunzima banayo uphawu i ijamo emincane. Rune Fehu, ukubaluleka okuyinto lihlotshaniswa impumelelo, wenzalo ukukhula, ukuboniswa ngesimo amagatsha esihlahla futhi uhambisane uhlamvu "f" futhi "» (f, v).
Namuhla, lolu phawu isetshenziswa ngezinhloso ezehlukene: ukuqhuba imicikilisho yokusebenzelana imilingo, imidwebo ongokomfanekiso. Ikakhulukazi ethandwa ukubhula Runes.
Uphawu endala amakhadi Celtic Rune Fehu kubhekwa. Inani ukuqagela kungani ezindaweni ezihlukahlukene kakhulu incazelo. Kusukela ezikhathini zasendulo, lolu phawu unikelwe onkulunkulu Nordic wenzalo Freyr futhi Freyja uthando. Ngakho-ke, ngo-, isikhundla salo esivamile uqotho Fehu siqondwa njengophawu ingcebo nempumelelo, engokoqobo nengokomoya.
Nokho, uphawu Rune ngamunye ithwala eziningi ongakhetha for perusal. Ayikho ngaphandle kanye Rune Fehu. Meaning of uphawu kuncike hlobo simo, inhlanganisela nezinye runami futhi uphawu izikhundla.
Ochwepheshe ukukhomba runiform inhlanganisela izimpawu izakhi. Rune Fehu (okusho Nokho obumbene nenzalo nokukhula) libhekisela element of umlilo. Lapho simo, uwe ngokuhlanganyela izimpawu esifanayo, ubikezela ukucindezeleka ngokomzwelo, baphendukela ezingalindelekile imicimbi, onamandla wokuba isehluleki. Lokhu incazelo Fehu Rune uthola lihambisana Runes timphawu emoyeni.
Izimpawu yamanzi, naphezu kokuphikiswa zemvelo komlilo, kunalokho, ikhomba ngiyibona yokudala, kusetjentiswa ngemphumelelo amapulani.
It ubhekwa inhlanganisela yimpumelelo kakhulu Fehu Rune umhlaba element. Limele ingcebo, iholo, ukukhula umsebenzi.
Yiqiniso, kungcono incazelo pretty ezingacacile. Kuyadingeka umkhondo ukuba izibonelo eziqondile.
Ngakho, lesi sithako kanye Rune nalutho Fehu Wyrd uthi lezimanga umusa ukudalelwa. Ngokuhlanganyela Rune Uruz bangalindela sokuthola ifa. ukucindezeleka kwemizwa, kanye nokulahlekelwa Rune Fehu zithembiso, okusho ngokuhlanganyela uphawu Thurisaz izipho ukudalelwa. Kodwa Inyunyana Fehu futhi Ansuz, Raido, Vuno noma Cano, ngakolunye uhlangothi, umemezela isixazululo ngempumelelo amacala, ukuchuma ngokwezimali.
Kungenye yezinhlekelele coupling futhi Rune Fehu Hagalaz, Samba noma Nauthiz. Ziyakwazi ezikweletini, inhlekelele, ngisho nokufa.
Uxhumano abesifazane Fehu nge uphawu Perth is ambulense, kodwa ukukhulelwa okungafunwa, futhi amadoda, kunalokho, - inzuzo yezezimali.
Ukuze siphumelele ezindabeni professional ukubonisa nge pops Fehu Rune Soul, Teyvaz noma Laguz.
Rune Fehu akuyona njalo kube inkomba yokuthi izindaba zezimali. Lapho izandla siqu, ke kungahunyushwa ngendlela ehluke kakhulu. Ngokwesibonelo, uma uhlamvu awe isikhundla okuqondile, bese ukhuluma umuntu, ngubani ukuzibuza ukuthi akancike, uyazethemba futhi evikelekile. Nayo ungakwazi ukwakha ubuhlobo, Ayoletha inhlalakahle besese futhi bethuthuka ngokomoya. Rune Fehu (uthando okusho) kukhomba lomshado ezisheshayo abakhethiweyo. Nokho, kuyinto lapha ukuba banake eziningi izinhlamvu liwile. Ngo inyunyana, bangakwazi zifanekisela ngezindleko ezinkulu.
Kuye ukuqondanisa isithombe, Rune Fehu, inani layo amaphuzu isidingo sokulondoloza ubungane nabangane bakudala, ukukhumbula abangane onokwethenjelwa futhi abaqotho. Mhlawumbe esikhathini esizayo sizodinga usizo lwabo.
Njengoba kuye kwashiwo, kuxhomeke kakhulu ezinyathelweni yokuma Runes. Incasiselo Fehu - lena ngokuvamile iwuphawu ukulahlekelwa, imfucuza, ukucindezeleka ngenxa baqhubeka iphrojekthi kuqalise noma ubuhlobo. Yiqiniso, ukuphathwa kungenxa ngenhloso nohlobo esandleni.
Ngakho, ngo-kathathu ilungiselelo Rune Fehu (nabokhulumile) ukunika value negative, kwaqala inkathi amile ezimweni lapho ukubala mayelana naleli cala ujabule akudingekile. Uma ngalesi sikhathi lo muntu uye wanquma ukungena noma yiliphi ibhizinisi project ke nabokhulumile le Rune uxwayisa isimo ezingenalutho womuntu ongabazisayo.
Endabeni ngamunye, isitatimende ezinjalo phawu lubonisa ukuthi badumala okuseduze ubudlelwano, ubungani noma uthando. Lokhu kuyinkomba ukungabaza, izingxabano, ukungathembeki lapho kukhona Runes ezingezinhle. Uma umfelandawonye kuhloswe Runes ngendlela enhle, khona-ke lezi zinkinga zizoxazululwa ngokushesha nokulahlekelwa ubuncane bezimali nobungokomzwelo. Iseluleko kuphela lapha kungaba ukubonakaliswa isineke ukuzibamba. Rune Fehu (Inani ubuhlobo) Ngezinye izikhathi kuthiwa ngesimilo somuntu, otshela ukuthunjwa, Ukuthanda lwakhe okungabazisayo, ubungane edidayo.
Ungakhohlwa mayelana Runes inhlanganisela. Mayelana ibhizinisi, uma kukhona izinhlamvu evumayo Rune Fehu (inani, incazelo nokuchazwa kwayo) eshintsha umhlahlo yayo inkathi yesikhathi futhi izimo. Mhlawumbe, kuyoba khona ukubambezeleka ezingalindelekile iphrojekthi. Ngakho-ke kufanele bathathe ikhefu. Kodwa isikhathi uzokutshela, kubalulekile ukuqhubeka kuqalile noma kangcono ukushintshela ndaba ezahlukene. I umfelandawonye Runes "omubi" kusho ngokucacile mayelana kungenzeka ukulahlekelwa kwezimali kanye nokwehluleka. Ukuze ngokunenzuzo aphume isimo, kumelwe ukuvala iphrojekthi entsha, futhi kwaphela isikhathi esithile ukuze uzinike ikhefu.
Lapho jikelele izibikezelo uphawu kungase kubonise isimo sempilo kanye ehambisana nezindleko impahla ukuthi ngokuvamile athwala i Rune okuhlanekezelwe Fehu. ukubaluleka kwalo usesimweni esinjalo simele Ukugula. Futhi uma lokhu emgqeni olandelayo lehla Thurisaz isimo angase abhekane ukuhlinzwa okukhulu noma ukuhlukumezeka. A uphawu evumayo uma elilandelayo ukuwa Rune Algiz. Limelela sokuphulukiswa, ekutholeni abashisekeli, kokuphothula kunjalo, nakuba kungase kuthathe isikhashana.
Ngaphezu kwalokho yaphendukela ekubhuleni, Rune Fehu ngokuvamile ukhonza njengelungu mascot abantu abafuna ukuheha uthando, ingcebo, sikufisela inhlanhla. Ukuze lolu phawu isetshenziswa zemali, ubucwebe, izinto ezithile ekhaya, isisebenzi ehhovisi. emisha wanamuhla evumelanisiwe tattoo. Kodwa asondele ke kufanele baqaphe impela. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kulabo abakholelwa nezimfihlakalo futhi magic.
Izazi zikholelwa ukuthi ukusebenzisa ingcaca uphawu Runes - kungcono nje ukhiye. Sithola isibonelo esithi asifane singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela uhlelo lwekhompyutha, okuyiwona udinga ukhiye noma iphasiwedi ukuze kusebenze. Lona nje ithuluzi, hhayi umthombo umlingo nobungqabavu.
Rune Fehu, ukubaluleka, incazelo Inhloso yayo ukwenza kusebenze amandla okudala noma design, okunikeza ithemba muntu, simenze ukuba bazimisele kakhudlwana, okunenjongo, ukuphenya ngenkuthalo nokuhlola nesu. Ngenxa yalezi zimfanelo, wakwenqaba ngokuqinile izinyathelo sifinyelele umgomo yayo ngempumelelo ifinyelela kuye.
Abagxeki bakholelwa ukuthi akusiyo ngokwayo uphawu uhlamvu, kulesi simo, inkolelo komuntu amandla akhe ezingaqondakali kuyasiza benqoba ubunzima futhi impumelelo. Phela, amandla awukwazi ukuthatha angaqondi ukuthi kungani. A Rune Fehu, izithombe, ogama value iyatholakala cwaningo namuhla, wonke umuntu - kuyinto mkhuba ongaqondakali kakhulu futhi engcwele kudingeka kahle "Ukuvula" futhi usebenzise.
Kusukela Runes kukhona uhlobo babashayeli emhlabeni yemvelo futhi izimiso zawo ukwenza okuthile angenakukwazi kufanele wenziwe ngezinto zemvelo (ngokhuni, ngamatshe, noma ubumba). Omunye kungaba godu ukukhetha impahla nge value ongokomfanekiso. Rune Fehu, ukubaluleka okuyinto bagxila ingcebo, inzuzo, impumelelo, kuwukuhlakanipha ukubheka imali noma ulamula isihlahla, Malachite noma iso tiger sika. Zonke lezi zinhlobo zezindwangu futhi banamandla ukuheha umcebo.
Rune kumelwe kuqala ukudweba bese usika eduze nentaba, ukuma sangaphandle nensika yalo akunandaba. Runes of ochwepheshe batusa ukwenza uphawu eyakho kuso kudingeka onge amandla "master".
Lapho beqeda Rune (ie kakhulu uphawu ke) kungenziwa zaveza. Ngokuphathelene indlela Fehu igolide, onsundu ngokuphaphathekile noma abe bomvu. Uma Rune kudalwa balahle encintisana kunethonya elibi, Kungcono abamnyama.
Rune manje sathi enkosini yaso ukubonga, kufanele senziwe isimo ezolile futhi egqamile. Kungenjalo, amandla engalawulwa enikeza uphawu akhethiwe kungaholela nenhlekelele womuntu. Kumele kukhunjulwe ukuthi ukuqoba Runes - kuyinto isiko wemfanelo, ke uyozuza kuphela okumsulwa, natures uhlobo.
Kuye ngobukhulu kanye shape uphawu, ingasetshenziswa njengentelezi entanyeni yakhe, wafaka esikhwameni noma endaweni ezingafinyeleleki prying amehlo nezandla. Ungakwazi Ngokuqinisekile uthenge futhi ukulungele uboya, kodwa kufanele kube amandla nezingahlobene nendaba (master umdayisi). Futhi lolu phawu lasendulo akayithandi kufanele kube obuseduze, siqu. Uma production ozimele ngoba ezinye zezizathu akunakwenzeka, lo mkhosi-ke kufanele esiphathiswe umuntu abasondelene naye okunokwethenjelwa ongenazo umhawu futhi akukho imicabango emibi ngase umnikazi ngekusasa lophiko Runes.
Ephakathi wanika abantu kwenye okusungulile yokubhula - okubhula. Baphinde babe uhlelo oluthile izimpawu, kodwa ningathwali anencazelo ezinkulu imilingo njengoba Runes. emphemeni Classic sehlukaniswe Arcana ezinkulu nezincane. Ikhadi ngalinye oluhambisana-malware ngesici esithile, iplanethi, futhi, Isimanga siwukuthi, uboya.
Rune Fehu e Tarot oluhambisana uphawu "Tower". Kuyinto 16 Major Arcana nencazelo oyinkimbinkimbi kakhulu. Esikhathini incazelo zasendulo "Tower" ebhubhisa, ngaleyo ndlela izimo intuthuko, benqoba ubunzima. It imelela okuthile lokho kwenzeka ngokuphazima kweso - banokuqondisisa akwenza, njll Negative Umdwebo uhlamvu ukuthi zonke izinguquko okungazelelwe kuholele esibucayi, ingxabano, futhi ukubhujiswa ngokomzwelo yomuntu.
Nabokhulumile "Tower" njengoba Rune Fehu kulesi sikhundla, okubonisa okuseduze ezikweletini, ingozi, ukugula okungathí sina. Kodwa uma Rune elifanekisela ubunzima besikhashana isinqumo kungenzeka esikhathini esizayo, noma ikhono khuza them lo nabokhulumile "Tower" categorical enkulumweni yakhe futhi ithi eside ibha omnyama empilweni.
Encwadini siqu simo uphawu okubhula efana Fehu, kubonisa ukuthuthukiswa nothile. Nokho, isigijimi engakhi "Towers" kuxwayisa kwesivivinyo: ngokwahlukana bephoqeleka noma ubuhlobo test ukwethembeka. Esikhathini isikhundla nabokhulumile, ithi severance of ubudlelwano, ukudumazeka.
ukuvumelana Abaningi phakathi kwamakhadi Tarot Rune Fehu siyenzeka ezandleni, emsebenzini wokuziphilisa. Esikhathini isikhundla phambili ngowokuqala ubikezela izinguquko ezinqala ukuthi kuzodinga eningi ukuhlakanipha kanye nokuzimisela. Incasiselo "Tower" njengoba Fehu kubonisa ezingalindelekile, eyinhlekelele iphrojekthi ekupheleni, okwesula okuthunyelwe noma ukulahlekelwa ezinkulu zezimali. Yiqiniso, incazelo eqonde kakhulu incike lihambisana namanye amakhadi enhlanhla.
Umbuzo ukholo zemfihlakalo
Kunoma isikhundla (oluqondile noma nabokhulumile) Rune Fehu, inani layo, kuvimbela umuntu efinyelela ukubikezela nokuqaphela a professional futhi bathande ndawo. Lesi sici esiphawulekayo Runes. Abagcinanga nje ngokuthandaza ukubikezela ikusasa, kodwa futhi athwale iseluleko esingaguqula ezinye zezenzakalo noma ukuxwayisa zonke. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene Rune isikhundla nabokhulumile. Kusukela kulokhu, izithiyo kanye nezinguquko ezingenza abe yinkinga yembulunga yonke.
Yiqiniso, ngeke ukholwe ukuthi - kukhethwa ngamunye. Kodwa Runes beza kithi kusukela ezikhathini zasendulo ngokusho legend amadlozi, ukwakha hhayi nje abantu, bese kuqokwa, owadlula incazelo ezingaqondakali lwezimpawu ngomlomo. Ngokuhamba kwesikhathi, kukhona okuye kwashintsha, walahlekelwa futhi ukhohliwe, kodwa izinga obukhulu magic Runes Fehu, kanye nezinye izinhlamvu, isebenza futhi kusiza abantu baphathwa nangomphefumulo kuso.
Kanjani ukuthuthukisa umuzwa namakhono esicashile bebodwa?
Imfihlakalo amagama. Lisho ukuthini igama uChristine?
Okuchaza uma efulethini landizela ilulwane?
Biography Irina Bezrukova - unxantathu ebulalayo
Ihhotela Ban Nam Mao kuyona 3 *, Thailand, Pattaya. Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza
Indlela yokufaka isicelo somsebenzi wesikhashana? Qopha encwadini yomsebenzi ngokuhlanganisa: isampula
Shahe River, Krasnodar esifundeni: incazelo, izici, izithombe
Paratrofiya ezinsaneni: degree of ukwelashwa